लामो समयमको संघर्षपछि देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो। संघीय ढाँचामा अनुकूल हुनेगरी नेपालले २०७२ असोज ३ गते संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको संविधान जारी भयो। अहिले देशमा तीन तहका सरकार सञ्‍चालनमा रहेका छन्। गणतन्त्रको स्थपना गर्न वा...
ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन गतसाता नेपाल आएका बेलारुसी राजदूत एन्द्रेइ रेयुस्कीले आफ्नो नेपाल बसाइलाई औपचारिक भेटघाटमा मात्रै सीमित राखेनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र पनि बुझाए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गरे। त्यसबाहेक विभिन्न क्ष...
अमेरिकाको हवाईस्थित अकामाई युनिभर्सिटीका प्राध्यापक मेदनीप्रसाद भण्डारी जलवायु परिवर्तनकै बारेमा चर्चा गर्न कहिले युक्रेन पुग्छन्, कहिले केन्या। जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास उनको मूलविषय हो। ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ शीर्षकमा प्रकाशित लामो सामग्रीमा उनले ‘पृथ्...
काठमाडौं : महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकालको काँधमा आएको छ। आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामलाई सातवटा प्राथमिकता अगाडि सारेर उनी बिहानैदेखि सडकमा सिठ्ठी र सेट बोकेर निस्किन्छन्। के यसरी मात्रै ...
के हो आरटिजिएस प्रणाली? के छ फाइदा?
काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा भुक्तानी गर्दा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीमा नयाँ युगको सुरुवातको रुपमा लिएको जनाएको छ। चेक वा अन्य माध्यम प्रयोग नगरी ठूल...
तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न 'सूर्य'बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हृदयश त्रिपाठी 'स्वतन्त्र राजनीतिक समूह'लाई देशव्यापी बनाउन लागेका छन्। त्रिपाठी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्दै छन् भन्‍ने चर्चा पनि नचलेको होइन। तर उनी अहिल...
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको उत्पादन क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट छ। विद्युत् उत्पादनको यो क्षमता मुलुकको अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। मुलुकभरिको कुल उत्पादनको २२ प्रतिशत जलविद्युत उत्पादन क्षमता सुदूरपश्चिममा मात्रै छ। त्यसैले यो प्रदेश जलविद्युतमा धनी ...
साढे ३३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कति सुरक्षित भन्ने विषयमा सतही बहस सुरु भएको छ। शनिबार चिनियाँ ह्याकरले नेपालका बैंकहरूका एटिएमबाट नक्कली कार्डमार्फत पैसा चोरेपछि सर्वसाधारणमा एक किसिमका सन्त्...
काठमाडौं : भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालको कृषिजन्य वस्तु आयात वार्षिक एक खर्बमाथि पुगेको छ। सरकारले निरन्तर कृषिमा लगानी गरेको जनाए पनि त्यसको प्रतिफल भने अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। अहिले पनि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा नै अधिकांश किसान अल्झेको दे...
धनगढी : ०७२ भदौ ७ गते थरुहट/थारूवान आन्दोलनको क्रममा टीकापुरमा हिंसात्मक झडप हुँदा आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकसहित नौ जनाको हत्या भयो। घटनामा दोषी ठहर भई संघीय सांसदमा निर्वाचित रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय भएको छ। यसैगरी, ७ गतेको घटनाको प्रतिशोध...